Excel For Myanmar – Page2– Excel lessons, tutorials, Problems & Solutions, Tips and Tricks for Myanmar!
Excel For Myanmar
Excel lessons, tutorials, Problems & Solutions, Tips and Tricks for Myanmar!
Nested IF lesson
Nested IF (2)
Calculation in IF
IF, AND ISBLANK
VLOOKUP in Staff Payroll
Getting Sheet Name List in Excel
Unlocking Excel sheet password
Comparing Two List
Zawgyi in Excel Filter
Perform Approximate Match
Excel ရဲ့ IF function ကို ပိုမိုနားလည်စေရန် နောက်ထပ် Lesson တစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Syntx IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) [value_if_true] သတ်မှတ်ချက်မှန်လျှင် အဖြေ [value_if_false] သတ်မှတ်ချက် မှားလျှင် အဖြေ အပေါ်ကပုံတွင်ကြည့်ပါ။ Car အမည်တွေနဲ့ ဈေးနှုန်းစာရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Basic Price ပုံမှန်ရောင်းဈေး ဖြစ်ပြီး၊ Maximum ကတော့ တခါတရံ ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အများဆုံးဈေး ဖြစ်ပါတယ်။ Difference... Continue Reading →
(IF function အတွင်း အခြားIF function များ ဆင့်ကဲ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ခြင်း ) Syntax IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) logical_test မှတ်ရလွယ်အောင် “သတ်မှတ်ချက်” လို့ ဘာသာပြန်ရအောင်ပါ။ [value_if_true] သတ်မှတ်ချက်မှန်လျှင် အဖြေ [value_if_false] သတ်မှတ်ချက် မှားလျှင် အဖြေ Lesson 1 ကို အောက်ပါ Link တွင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Nested IF ဒီ lesson မှာတော့ Car ဈေးနှုန်းတွေပေါ်မူတည်ပြီး... Continue Reading →
(Nested IF lesson 1) (IF function အတွင်း အခြားIF function များ ဆင့်ကဲ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ခြင်း) Syntax IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) Logical_test နေရာတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သော Operators များ ---------------------------------------------------------------------------- = Equal to <> Not Equal to > Greater than >= Greater than or Equal to... Continue Reading →
COUNT function ဟာ select မှတ်ထားတဲ့ cell ကွက်တွေထဲမှာရှိတဲ့ Number ဂဏန်း အရေအတွက်ကို ရေတွက် ဖော်ပြပေးပါတယ်။ Syntax COUNT(value1, [value2], ...) value1 မိမိ ရေတွက်လိုတဲ့ Number ဂဏန်းတွေရှိတဲ့ Cell ကွက် (သို့) Select ဧရိယာ value2, ...value2 က မထည့်ပေးလဲရပါတယ်။ Cell ကွက် (သို့) Select ဧရိယာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ Select ဧရိယာအတွင်း... Continue Reading →
တကယ့် လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ၊ အရေးတကြီး စားရင်းတွေ ကိုင်ရတဲ့အခါတွေမှာ အခြားသူတွေကို စာရင်းကို ကြည့်ခွင့်တော့ ပေးပြီး ပြင်လို့ ဖျက်လို့ မရအောင် Password ဖြင့် ကာကွယ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ တခါတရံ ထို Password ကို မိမိကိုယ်တိုင် မေ့သွားတတ်တာမျိုး လဲ ကြုံ ရနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေမျိုးမှာ Password ပြန်ဖြုတ်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Cell ကွက်အတွင်းရှိ data များကို ပြင်လို့၊ ဖျက်လို့၊ select မှတ်လို့မရအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
(1) Formula tab က Define Name ကို နှိပ်ပါ။ (2) Name Box တွင် Sheetlist ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။ (3)Refer to box တွင် = replace(get.workbook(1),1,find("]",get.workbook(1))," ") ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။ (4) Ok ကို နှိပ်ပါ။ (5) Sheet name ပေါ်စေလိုသော cell ကွက်တွင် =INDEX(sheetlist, row()) ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။ (6) ရိုက်ထည့်ထားသော... Continue Reading →
ဒီpostမှာ Excel မှာ အသုံးများတဲ့ IF function အကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Syntax IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) IF function မှာ အစိတ်အပိုင်း (၃) ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ (၁) logical_test်“သတ်မှတ်ချက်” (၂) [value_if_true] သတ်မှတ်ချက်မှန်လျှင် အဖြေ (၃) [value_if_false] သတ်မှတ်ချက် မှားလျှင် အဖြေ ရှေ့ဆုံး သတ်မှတ်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး အဖြေ(၂) မျိုးအနက် တစ်မျိုး... Continue Reading →
Perform Approximate Match in Excel with INDEX and MATCH formula